Ugari neInvestment yeAntigua neBarbuda uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muAntigua neBarbuda ye:
● Kugara nekudyara muAntigua neBarbuda
● Ugari nekudyara kubva kuAntigua neBarbuda
● Visa yegoridhe muAntigua neBarbuda
● Pasipoti yechipiri kubva kuAntigua neBarbuda
● Ugari nekudyara kweAntigua neBarbuda nekudyara muzvivakwa
Best Vamiriri veCitizenship neInvestment muAntigua neBarbuda uye Magweta e Citizenship kubudikidza Investment muAntigua neBarbuda uye nevaichinja kuti real estate Citizenship zvirongwa muAntigua neBarbuda vanoshanda pamwe chete kuchengetedza kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veAntigua neBarbuda vanopa masevhisi ekugara nekudyara muAntigua neBarbuda, Citizenship nehurongwa hwekudyara muAntigua neBarbuda, Citizenship nehurongwa hwekudyara muAntigua neBarbuda, Citizenship yechipiri nekudyara muAntigua neBarbuda, hunyanzvi hwehukama nekudyara muAntigua neBarbuda, ugari hwehugari nekugara nekudyara muAntigua neBarbuda, Citizenship yekusingaperi nekudyara muAntigua neBarbuda, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara muAntigua neBarbuda, Citizenship nehurongwa hwekudyara muAntigua neBarbuda, Citizenship nehurongwa hwekudyara muAntigua neBarbuda , Kugara nekudyara muAntigua neBarbuda, Kugara nehurongwa hwekudyara muAntigua neBarbuda, Kugara nehurongwa hwekudyara muAntigua neBarbuda, Residence yechipiri nekudyara muAntigua neBarbuda, Residency mbiri nekudyara muAntigua neBarbuda, pekugara nehugari hwekugara nekudyara muAntigua neBarbuda, kugara uyeugari nekudyara muAntigua neBarbuda, hupfumi Residency zvirongwa muAntigua neBarbuda, Kugara nehurongwa hwekudyara muAntigua neBarbuda, Kugara nehurongwa hwekudyara muAntigua neBarbuda, pasipoti yechipiri kuAntigua neBarbuda, mapasipoti echipiri eAntigua neBarbuda, kechipiri chirongwa chepasipoti muAntigua neBarbuda, pasipoti yepiri yechipiri muAntigua neBarbuda, pekugara uye yechipiri pasipoti muAntigua neBarbuda, repasipoti repasipoti repiri muAntigua neBarbuda, repasipoti repiri nekudyara muAntigua neBarbuda, repasipoti yekuva mugari wechipiri muAntigua neBarbuda, wechipiri pasipoti chirongwa muAntigua neBarbuda, chechipiri pasipoti zvirongwa muAntigua neBarbuda, vhiza yegoridhe muAntigua neBarbuda, vhiza dzendarama muAntigua neBarbuda, zvirongwa zvendarama zve visa kuAntigua neBarbuda, chirongwa chendarama vhiza muAntigua neBarbuda, vhiza yegoridhe vhiri muAntigua naBarbuda, chirongwa chechipiri chevisa vhiza muAntigua neBarbuda, vhiza mbiri dzendarama muAntigua neBarbuda, c itizenship uye vhiza vhiza muAntigua neBarbuda, kugara uye vhiza yegoridhe kuAntigua neBarbuda, mugari vhiza mugari muAntigua neBarbuda, dhiza vhiza dhizaina kuAntigua neBarbuda, zvirongwa zvevisa zvegoridhe kuAntigua neBarbuda.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara muAntigua neBarbuda nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muAntigua neBarbuda yeU Citizenship nekudyara: USD 100,000
Nhanganyaya Antigua naBarbuda uye Citizenship neInvestment
Dzidza zvakawanda nezve Antigua neBarbuda
Zvinonzi makungwa e365 anogona kuwanikwa murudzi, imwe yezuva rega rega regore. Yakabvumirwa kana kuti kwete, nyika iri kumusha kune yakanyanya kunaka chena uye pingi jecha mhenderekedzo yegungwa muCaribbean. Dickenson Bay igungwa refu uye rinonakidza, kazhinji rakamanikidzwa nevanhu uye rakatakurwa nemhedzisiro dzakasiyana dzinofungidzirwa, kubva pakufamba muchikepe chegirazi-bhazi kuenda kubhanana richikukurwa uye kubhururuka kuchwa. Pigeon Point ndiyo yakakosha ruzhinji rwegungwa kumahombekombe ekumaodzanyemba, kwaunogona kushambira, kushambira, uye sunbathe. Kunyange hazvo isiri iyo isingazivikanwe, Half Moon Bay igungwa rakanamatira uye rinogara rakasiiwa gungwa.
Hutongi hwemuno hunowanzobatanidzwa mumatunhu ari kure uye munzira dzinokwira. Zvitsuwa izvi zvinogara pamhando dzinopfuura zana dzemhuka dzine mapapiro, semuenzaniso, egret diki, guruva rine ruvara rwevhu, uye mhou dzakasiyana. Bharbuda musha weimwe huru shiri dzakachengeteka pasi pano, Codrington Lagoon National Park, iyo inokoshesa zvinoshamisa chisikwa chine minhenga chefrigate. MaCoral reef anozadza seakajeka akanyudzwa musango gyms kune vane simba kusvetuka uye vanoshambira. Cades Reef, munzvimbo yeSt. Mary, ndeyechokwadi kukosha kune wese ane simba kushambira uye diver! Chitsuwa cheAntigua neBarbuda ndicho hunyengeri hwekutengesa kweCaribbean, pamwe pamwe nemahombekombe egungwa uye pekugara papasi. Iyo zvakare imba kune vangangove vanodiwa kwazvo vanhu vauchasangana navo. Chii chinoita kuti Antigua neBarbuda ive yakasarudzika kugona kwayo kuchengetedza chaiyo yeCaribbean kunzwa ichipa vashanyi akakosha uye emhando kusangana. Antigua inoti ine gungwa rimwe chete gore rese. Chokwadi chinotaurirwa, chikamu chakazara chinogona kutsanangurwa pane izvi, asi nekukurumidza, maficha anorangarira Half Moon Bay yemahombekombe ekumaodzanyemba, inowanzofungidzirwa nezvesarudzo yakanakisa yechitsuwa ichi. Iyo haina kudhonza mune yakaenzana nhamba yemitumbi seakasiyana emahombekombe egungwa, zvisinei nekuti iyo inokosheswa nemhepo yekumhepo.
Chiremera cheveruzhinji chinoshandisa inotarisirwa 2.5 muzana yeGDP yayo pakuraira, ne91 muzana yevadzidzi vakanyoresa kupedza makore manomwe anokosha ekurairwa chikoro. Vakomana vanoongororwa kushandisa zvakajairwa makore gumi nemaviri muchikoro, uye vanhukadzi 12. Zvinoshamisa, chikamu chevakadzi kuvarume vanoenderera mberi nechikoro chavo chekupfuura chikoro chekuzvisarudzira chiri maviri kusvika one.
Nepo zviwi zviri pachena, ivo vanoshanda pasi pehurumende yakagadzwa, zvichireva kuti Mambokadzi weBritish Elizabeth II, ataurwa naGavhuna-General Rodney Williams, achiri iye mutungamiriri wenyika. Zvisinei, panezve Mutungamiriri, Gaston Browne, uye dzimba mbiri dzehutongi, Seneti neImba yeVamiririri, iyo inobvumidzwa nebumbiro.
Antigua neBarbuda zvese zviri zviviri zvinangwa uye zvekufambisa nyika nekuda kwekubiridzira zvisiri pamutemo, zvese kuita zvepabonde uye basa rakamanikidzwa. Mishumo yebonde inobata nerudzi rwechipfambi yakaratidzirwa seiri kuitika mumabhawa neepfambi, nepo basa rakamanikidzwa risiri nyore kuona, rinowanzo kuwanikwa munzvimbo dzekumba uye dzekutengesa. Kunyangwe zvitsuwa zvisingazivikanwe nekuedza kushinga kuedza kuuraya kushandiswa zvisiri pamutemo, zvigadziriso mumatambudziko ari kutariswa kunge akaitwa sepanguva yekupedzisira.
Iyo indasitiri yekufambisa izere rinoshamisa rechitubu cheGDP yezvitsuwa, sezvazvinowanzoitika munzvimbo yeCaribbean. Kugadzira 60% yeinowanzoita $ 2.4 bhiriyoni GDP, haifanire kuvhundutsa chero munhu kuti 80% yevashandi iri mubhizinesi rezvekutonga.
Ipo payakakomberedzwa neBritish, nzimbe yakashanduka ikava mari huru yeAntigua. Kuzviisa pasi kwakashandiswa senzira yekumhanyisa kunze kwekutenderera. Mushure mekusunungurwa kwevaranda ava muzana ramakore regumi nemapfumbamwe, vazhinji vevaAntiguan vakavaka chishuwo chekuzvitonga, vamwe vachishuvira kufanana nedzimwe nyika dzeCaribbean.
Kutyaira ndiyo inonyanya kuzivikanwa mhando yekufambisa muAntigua neBarbuda, nematekisi anoshandiswa zvakanyanya, uye vatyairi vazhinji, mune chero chiitiko, kutora vafambi parwendo rwekushanya. Masisitimu ekufambisa akamisikidzwa asi asingawanzoshandiswa. Uyezve, zvikepe zviri pedyo nezvikepe zvinomhanya kazhinji, uye kune nzendo pakati peAntigua neBarbuda.
Ivo vemuno kuzvitsuwa vanowanzove vane mwero zvine mutsindo, neramangwana revanhurume makore angangoita makumi manomwe neshanu, uye vakadzi pamakore makumi manomwe nemapfumbamwe. 75 muzana yeGDP yenyika ino inoshandiswa mukugara zvakanaka, ichivimbisa kuti kwakapoteredza 79 muzana yevagari vemo vanosvika kunzvimbo dzakakodzera dzekudzivirira mbichana kutanga muna 5.5.
Nepo mwero wekushaikwa kwebasa muAntigua neBarbuda iri gumi muzana, vanhu vane mihoro yakagadzikana vakaziva hunyanzvi hwazvino, uye vakadzika midzi. Muna 11, yakaverengerwa kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvemhuri zvaive nemaTV, uye muna2008, kune vanhu chiuru chimwe chete, paive ne97 yenhengo dzenhare.
Kunze kwemaindasitiri ekufambisa, makuru ebasa ekugadzirisa pachitsuwa indasitiri nekurima. Zvinhu zvekurima zvakakosha zvinosanganisira donje, zvigadzirwa zvevhu, nzimbe, uye mhuka dzinochengetwa. Mabhizimusi ekutanga anosanganisira anozivikanwa indasitiri yekufamba, kusimudzira, uye kuungana kwechiedza kwezvinhu, semuenzaniso, zvipfeko nedoro.
Antigua naBarbuda havana mibvunzo yakakosha pasirese uye vanoramba vakadzikama zvechokwadi. Ivo vane assortment yemafambiro ekuperekedza, kusanganisira Poland, Cameroon, US zvakare, iyo UK Ivo vanounza kune yakawanda chikamu kubva kuUS zvakare, Spain.
Zvinyorwa zvekutanga nezve Citizenship neInvestment yeAntigua neBarbuda
Chishoma kudyara kwe Ugari nekudyara muAntigua neBarbuda
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Andiguya neBhabhudha
Ugari nekudyara kweAntigua neBarbuda
Chitupa chekuva mugari wenyika uye pasipoti yakapihwa (hapana kodzero dzekuvhota)
Kuchengetedza nguva yeU Citizenship nekudyara kweAntigua neBarbuda
Pakarepo hupenyu hwekuva mugari wemo. Pasipoti yakavandudzwa makore ese mashanu nekubhadhara mari shoma kwazvo.
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa vagari vemuAntigua neBarbuda
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweAntigua neBarbuda
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweAntigua neBarbuda
Antigua naBarbuda, zviwi zveCaribbean zvine runako rwepanyama, zvinopa imwe yeanokurumidza mapurogiramu evhita endarama anowanikwa nenzira dzakasiyana siyana dzekudyara. Iko kunyorera kunogona zvakare kusanganisira nhengo dzemhuri yepedyo. Iwe haufanire kubhadhara yako yepasirese mutero wemari, uye iwe unenge usina chero capital capital inowana mutero, chivakwa mutero, kana wega mari yemutero. Ugari hweAntiguan-chirongwa chekudyara chinogashirawo vanyoreri veIran.
Kufamba kwemhuri muAntigua neBarbuda
Iwe unogona kusanganidza nhengo dziripo dzemhuri yako muchikumbiro, saka sarudzo dzakanaka dzekufamba dzichave dzichiwanikwa kune vaunoda. Izvi zvinoshanda kune wawakaroorana naye, pasi pevana vane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa, uye nasekuru nasekuru vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu. Vabereki vanoverengerwa muchirongwa nemunyori mukuru Vana vanokodzera chero bedzi ivo vari vadzidzi.
Citizenship Nehurongwa hwekudyara muAntigua neBarbuda inokurudzira
Zvinotora chete 3-4 mwedzi kubva pazuva rekutumirwa kusvika iwe wawana vhiza yako, uye maitiro ekunyorera akanyatsojeka Unogona kuendesa chikumbiro chako kubva kune yako nyika yekumba, uye hapana chikonzero chekugara muAntigua neBarbuda pamberi kana shure kuva mugari wenyika. Mukati memakore mashanu mushure mekuwana hukama hwako, iwe unongofanira kupedza mazuva mashanu munyika.
Mitemo yekushandisa pasi pesarudzo yezvivakwa inogona kusiyana zvichienderana nechirongwa. Naizvozvo, zvakakosha kuti usarudze projekiti yezvivakwa iyo inogona kupa zvinyorwa zvinodiwa nemusimudziri weCitizenship Chikumbiro.
Mari inodiwa yeAntigua neBarbuda
Kune nzira nhatu dzekuwana antigua ugari kuburikidza nekudyara. Yekutanga ndeye $ 200,000 muripo wakaenzana kuNational Development Fund. Neimwe nzira, iwe unogona kuisa inokwana madhora mazana mana emadhora mazana mana muhurongwa hwepasirose-hwakagamuchirwa zvivakwa zvakachengetedzwa kweanosvika makore mashanu kana kusvika kuchikamu chakakura cheprojekti. Chekupedzisira, iwe unogona kudyara inokwana USD 400,000 kana angangoita $ 5 (yakazara mari ye $ 1,500,000).
Imwe mari yekuwedzera inosanganisira US $ 50,000 yenyika fizi uye US $ 7,500 inokosha yekuvimbika mubhadharo pamunhu. Huwandu chaihwo hwemari dzekuwedzera zvinoenderana nenhamba yemitezo yemhuri inosanganisirwa mukushandisa․
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara kweAntigua neBarbuda
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents eAntigua neBarbuda uye Citizenship ne Investment Lawyers yeAntigua naBarbuda inopa vatengi uye mhuri dzavo muAntigua neBarbuda nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuAntigua neBarbuda, kugara nekudyara kubva kuAntigua neBarbuda uye nemimwe mikana yekudyara yekufambisa, munyika makumi matatu nenomwe
Mabasa edu haana kungogumira mukugara nekudyara kubva kuAntigua neBarbuda kana Golden Visa kubva kuAntigua neBarbuda kana kuva mugari nekudyara kubva kuAntigua neBarbuda kana pasipoti yechipiri, tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuAntigua neBarbuda, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani muAntigua neBarbuda kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muAntigua neBarbuda uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuAntigua neBarbuda nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha rwevagari vemuAntigua neBarbuda:
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa yeAntigua neBarbuda, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeAntigua neBarbuda, inokwanisika mari yekutsvaga mari yekuenda kune dzimwe nyika yeAntigua neBarbuda, Citizenship inodhura nevezvekudyara mari yeAntigua neBarbuda, Citizenship inodhura nemagweta ekudyara eAntigua neBarbuda uye nekambani yekutengesa yekufambisa inofamba yeAntigua neBarbuda
Ugari nekudyara kubva kuAntigua neBarbuda kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muAntigua neBarbuda kuenda ku37 Nyika.
Pasipoti yechipiri kubva kuAntigua neBarbuda kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuAntigua neBarbuda kuenda ku106 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuAntigua neBarbuda.
Goridhe visa zvirongwa muAntigua neBarbuda kuenda ku37 Nyika.
Ugari nezvirongwa zvekudyara kubva kuAntigua neBarbuda kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuAntigua neBarbuda kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuAntigua neBarbuda kuenda ku106 Nyika.
Ugari neInvestment yeAntigua neBarbuda kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muAntigua neBarbuda nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muAntigua neBarbuda, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweCitizenship nekudyara kweAntigua neBarbuda. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa muAntigua neBarbuda vane rondedzero yakanaka uye yavo midziyo iri munzvimbo dzakanaka muAntigua neBarbuda, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba zvirongwa zveAntigua neBarbuda nemari yekudyara muzvivakwa muAntigua neBarbuda.
Unoda kuziva - Antigua neBarbuda Citizenship neInvestment
Citizenship neInvestment Gweta reAntigua neBarbuda rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda. Yedu yakajairwa masevhisi e Citizenship neInvestment kuAntigua neBarbuda inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuAntigua neBarbuda kana kuenda kuAntigua neBarbuda, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo tisati takurudzira Citizenship nekudyara kweAntigua neBarbuda kune vatengi kuti vawane Citizenship yeAntigua neBarbuda uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingaira wakakodzera weAntigua neBarbuda, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi nehukama hwako nekudyara kunyorera kweAntigua neBarbuda isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Citizenship nekudyara kunyorera Antigua neBarbuda. Magweta edu akasarudzika eU Citizenship nekudyara kweAntigua neBarbuda uye vhiza yegoridhe ichabatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kweAntigua neBarbuda zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neAntigua neBarbuda.
Duration: 3 mwedzi
Kamwe chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweAntigua neBarbuda chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services muAntigua neBarbuda kusvika pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muAntigua neBarbuda:
Citizenship nebasa rekudyara kweAntigua neBarbuda hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera zvombo uye mabara kubva kana kuAntigua neBarbuda.
Citizenship nemapurogiramu ekudyara eAntigua neBarbuda hazvipi kupihwa kwehunyanzvi kuongororwa muAntigua neBarbuda kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuAntigua neBarbuda.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kweAntigua neBarbuda hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana zvematsotsi zviitiko muAntigua neBarbuda.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara yeAntigua naBarbuda hazvisi zvevanhu vanobata maGenetic zvinhu muAntigua neBarbuda.
Citizenship nebasa rekudyara kweAntigua neBarbuda haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine njodzi zvombo zvenyukireya kana nyukireya muAntigua neBarbuda.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweAntigua neBarbuda haruwanikwe kune vanhu veAntigua neBarbuda vanobata mukutengesa, kuchengetedza muAntigua neBarbuda, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara yeAntigua naBarbuda haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa yeAntigua naBarbuda hadzisi dzezvitendero zvechitendero uye avo anobatsira muAntigua neBarbuda.
Citizenship nebasa rekudyara mu Andiguya neBhabhudha haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muAntigua neBarbuda.
Ugari Hwedu magweta muAntigua neBarbuda haitsigire bhizinesi rekutengesera mumidziyo yemishonga muAntigua neBarbuda.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veAntigua neBarbuda neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muAntigua neBarbuda kubvumidzwa kwekukumbira Citizenship nekudyara muAntigua neBarbuda.
Ugari nekudyara muAntigua neBarbuda nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa Citizenship yakanakisa nerutsigiro rwekudyara muAntigua neBarbuda yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muAntigua neBarbuda.
Inotsigirwa nehukama hwepasi rose neyakavanzika ruzivo uye Antigua neBarbuda zvinodiwa nemutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hedu Citizenship nekudyara masevhisi eAntigua neBarbuda inopa yakachipa mitengo, ine yakanakisa kubudirira mukana weAntigua neBarbuda.
Isu takatora makore echiitiko kune hunyanzvi hwehukama kuenda kuAntigua neBarbuda kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuAntigua neBarbuda.
Ruzivo rweHurumende nevemari vanokumbira mari kuAntigua neBarbuda nevamiriri vezvemutemo veAntigua neBarbuda vachipa rubatsiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veAntigua neBarbuda kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Usati uri Citizenship yeAntigua neBarbuda uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuAntigua neBarbuda
Isu tine ruzivo rwepasi rose mu Citizenship nekudyara kusanganisira Antigua neBarbuda, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuAntigua neBarbuda inokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizenship neInvestment kuenda kuAntigua neBarbuda
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweAntigua neBarbuda ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi yeAntigua neBarbuda, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weCitizenship nehurongwa hwekudyara kweAntigua neBarbuda nedzimwe mhosva.
mhando vhiza yeAntigua naBarbuda
Maitiro Ekubvumidza Kubatira Antigua neBarbuda
Kwekugara kwenguva pfupi muAntigua neBarbuda
Permanent Residence muAntigua neBarbuda
Embassies uye ma Consulates eAntigua neBarbuda
Mitero muAntigua neBarbuda
Ugari neInvestment muAntigua neBarbuda uye mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muAntigua neBarbuda kune izvozvi kana zvichauya zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira pamwe nemhuri yako kuAntigua neBarbuda nekudyara, isu semumwe wako weAntigua neBarbuda, tiripo kuti tipe mamwe akawanda masevhisi uye uye kana paungangoda muAntigua neBarbuda nemitengo isingadhuri.
Kunze kweCitizenship nekutsvaga kwekudyara kweAntigua neBarbuda, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muAntigua neBarbuda, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano veAntigua neBarbuda vachitigadzira shopu imwechete yekuAntigua uye Barbuda nenyika 106.
"Takaisa makore ekuyedza uye nepasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi reAntigua neBarbuda mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweAntigua neBarbuda nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muAntigua neBarbuda nekukunze.
Kambani muAntigua neBarbuda
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muAntigua neBarbuda kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muAntigua neBarbuda yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muAntigua neBarbuda
Chero ani investor anotamira kuAntigua neBarbuda angazoda account yako yebhangi muAntigua neBarbuda uye account yebhangi yekambani muAntigua neBarbuda, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muAntigua neBarbuda
Incase iwe unoda kubvunza muAntigua neBarbuda, ye mhinduro dzemadhijitari muAntigua neBarbuda kunge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muAntigua neBarbuda kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Antigua naBarbuda kana muchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muAntigua neBarbuda kutanga pakarepo muAntigua neBarbuda.
HR Services muAntigua neBarbuda
Our kambani yevashandi muAntigua neBarbuda inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muAntigua neBarbuda vakasununguka.
Virtual Nhare dzeNhamba dzeAntigua neBarbuda
Bhizinesi foni masystem eAntigua neBarbuda pamwe ne nhamba dzeAntigua neBarbuda Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muAntigua neBarbuda
Accounting, kushingairira kwakakodzera muAntigua neBarbuda uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muAntigua neBarbuda
Setup bhizinesi muAntigua neBarbuda
Mushure meCitizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda, setup bhizinesi mu Andiguya neBhabhudha.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muAntigua neBarbuda
Webhu Kugadzira muAntigua neBarbuda
Ecommerce Kuvandudza muAntigua neBarbuda
Webhu kuvandudza muAntigua neBarbuda
Kuvandudza kweBlockchain muAntigua neBarbuda
App Kubudirira muAntigua neBarbuda
Software Kubudirira muAntigua neBarbuda
SEO muAntigua neBarbuda
Magweta e Citizenship neInvestment muAntigua neBarbuda
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro yeAntigua neBarbuda uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuAntigua neBarbuda, isu tiri vatungamiriri, gweta redu reAntigua neBarbuda rine vamiririri vekunze zvakare muAntigua neBarbuda, isu tine mukurumbira we kuendesa akanakisa mutengi sevhisi yeAntigua neBarbuda ine yakajeka nzira yekudyara mhinduro kune Antigua neBarbuda vanhu pamwe nemhuri dzavo. Hedu Citizenship neinvestment timu yeAntigua neBarbuda inopa zvakagadzirwa mhinduro dzekubudirira kweMutengi
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuAntigua neBarbuda, pamvumo yako yekugara muAntigua neBarbuda yakatenderwa.
Simba regweta reAntigua neBarbuda rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neHurumende nevemagweta ekudyara muAntigua neBarbuda. Kana iwe uri muAntigua neBarbuda kana kuronga kushanyira Antigua neBarbuda, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweAntigua neBarbuda kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeAntigua neBarbuda. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakapihwa dzidziso kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weAntigua neBarbuda.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muAntigua neBarbuda
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muAntigua neBarbuda?
Kugara nekudyara kuAntigua neBarbuda, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweAntigua neBarbuda kuburikidza nekudyara muhupfumi hweAntigua neBarbuda kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kugara kwekugara nekudyara kuAntigua uye Barbuda, kugaramo nehurongwa hwekudyara kweAntigua neBarbuda inotsigirwa nehugaro nemabasa ekudyara eAntigua neBarbuda, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ezvekudyara muAntigua neBarbuda, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muAntigua neBarbuda uye kugara kwakanakisa nevarairidzi vekudyara kweAntigua naBarbuda, vachishanda pakanaka pekugara nevamiririri vezvekudyara muAntigua neBarbuda, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika muAntigua neBarbuda.
Kugara nekudyara mabasa kweAntigua neBarbuda | Kugara patsva nevamiriri vezvekudyara muAntigua neBarbuda | Kugara patsva nemagweta eInvestment muAntigua neBarbuda | Kugara nemagweta ekudyara muAntigua neBarbuda | Kugara nevekudyara varapi veAntigua neBarbuda
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muAntigua neBarbuda?
Citizenship by investment to Antigua and Barbuda, can be defined as, kuwana ugari hweAntigua neBarbuda kuburikidza nekudyara muhupfumi hweAntigua neBarbuda kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muAntigua neBarbuda. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuAntigua neBarbuda, ugari nehurongwa hwekudyara kweAntigua neBarbuda inotsigirwa nehugari hwemo nevekudyara mabasa eAntigua neBarbuda, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muAntigua neBarbuda, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muAntigua neBarbuda uye kuva mugari wepamusorosoro nevarairidzi vezvekudyara veAntigua neBarbuda, vachishanda pahukama hwakanakisisa nevamiririri vezvekudyara muAntigua neBarbuda, uye nemafemu ekuona nezvekupinda nekubuda muAntigua neBarbuda.
Affordable Investor immigration services yeAntigua neBarbuda | Vanodhura vekupinda munyika vanokumbira muAntigua neBarbuda | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muAntigua neBarbuda | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muAntigua neBarbuda | Vanodhura varidzi vekunze vanachipangamazano veAntigua neBarbuda | Affordable immigration law firms for Antigua neBarbuda
Ndeipi tsanangudzo yepasipoti yechipiri muAntigua neBarbuda?
Yechipiri pasipoti muAntigua neBarbuda, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weAntigua neBarbuda kuburikidza nekudyara muhupfumi hweAntigua neBarbuda nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuenda kuAntigua neBarbuda , yechipiri pasipoti chirongwa cheAntigua neBarbuda chinotsigirwa nechipiri pasipoti masevhisi eAntigua neBarbuda, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muAntigua neBarbuda, magweta echipiri epasipoti muAntigua neBarbuda uye varidzi vechipiri vepasipoti yeAntigua neBarbuda, vachishanda zvakanyanya wechipiri mapasipoti vamiririri muAntigua neBarbuda, uye akanakisa mafambiro ekupinda munyika muAntigua neBarbuda.
Chechipiri pasipoti masevhisi eAntigua neBarbuda | Chechipiri pasipoti vamiririri muAntigua neBarbuda | Yechipiri mapasipoti magweta muAntigua neBarbuda | Yechipiri mapasipoti magweta muAntigua neBarbuda | Wechipiri pasipoti vanopa mazano eAntigua neBarbuda
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muAntigua neBarbuda?
Ndarama vhiza muAntigua neBarbuda, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara yeAntigua neBarbuda kuburikidza nekudyara muhupfumi hweAntigua neBarbuda nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuAntigua neBarbuda , yegoridhe vhiza chirongwa cheAntigua neBarbuda chinotsigirwa nemavhiza vhiza masevhisi eAntigua neBarbuda, kuburikidza nemagweta edu egoridhe vhiza muAntigua neBarbuda, magweta egoridhe vhiza muAntigua neBarbuda uye akanakisa evhita vhiza vhiza eAntigua neBarbuda, vachishanda zvakanyanya goridhe visa vamiririri muAntigua neBarbuda, uye akanakisa mafambiro ekuona mafemu muAntigua neBarbuda.
Goridhe visa services yeAntigua neBarbuda | Ndarama vhiza vamiririri muAntigua neBarbuda | Magoridhe vhiza magweta muAntigua neBarbuda | Magoridhe vhiza magweta muAntigua neBarbuda | Goridhe vhiza varairidzi veAntigua neBarbuda
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweCitizenship nekudyara muAntigua neBarbuda?
Pashoma kudyara kweCitizenship nekudyara muAntigua neBarbuda ndeye USD 100,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuAntigua neBarbuda kune Citizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muAntigua neBarbuda nevamiriri muAntigua neBarbuda vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muAntigua neBarbuda.
Ugari neInvestment kuAntigua neBarbuda inodhura?
Mutengo weCitizheni neInvestment kuAntigua neBarbuda uye Citizenship nemari inodiwa mari yeAntigua neBarbuda ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzurudza kweCitizenship neInvestment kuAntigua neBarbuda, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Citizenship ne Mhinduro dzekudyara.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kana investor visa kuAntigua neBarbuda?
Citizenship by investment services for inogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeye Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuAntigua neBarbuda kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance yeAntigua naBarbuda
Kumbira kubvunza Mahara kwehukama hwako neInvestment kuAntigua neBarbuda
Mazwi akakosha mu Citizenship neInvestment yeAntigua neBarbuda
Antigua Pier Boka Ltd.
Ministry of Information, Nhepfenyuro, Telecommunication & Ruzivo Technology
Antigua & Barbuda Investment Chiremera
Citizenship ne Investment Unit (CIU)
St. John Development Corporation (SJDC)
Mari Yekuchengetedzwa Kwemari Commission (FSRC)
Central Kushambadzira Corporation (CMC)
Ministry of Agriculture, Fisheries uye Barbuda Nyaya
Ministry of Health, Wellness uye iyo Nharaunda
Bazi rezveMari & Corporate Governance
Ministry of Social Shanduko, Hwevanhu Resource Development, Vechidiki uye Gender Nyaya
KUSIMBISA Dhipatimendi & ZveVashandi veVashandi
Antigua neBarbuda Hospitality Training Institute (ABHTI)
Antigua uye Barbuda Transport Board
Ministry of Sports, Tsika, National Festivals uye nehunyanzvi
Gavhuna General Chancery
State Inishuwarenzi Corporation
Yepamusoro Audit Institution yeAntigua neBarbuda
National Solid Waste Management Chiremera (NSWMA)
Antigua Port Chiremera
Ministry yeVashandi veVoruzhinji, Civil Aviation uye Energy
Ministry yezvekunze, Kutama uye kutengeserana
Ministry of Dzidzo, sainzi & Technology
Ministry of Legal Affairs, Ruzhinji Kudzivirirwa uye Vashandi
Ministry of Tourism uye Investment
Ministry of Housing, Nyika uye Urban Renewal
Mahara Kutengeserana uye Kugadziridza Zone
Gomo St. John's Medical Center (MSJMC)
Merchant Shipping uye Kutumira Kunyoresa
Antigua uye Barbuda Tourism Authority
Chibatsiro chekurapa Mano (MBS)
Link to Dhipatimendi reImigration yeAntigua neBarbuda , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muAntigua neBarbuda